दसैँका लागि टिकट लिँदै हुनुहुन्छ ? कहाँ पुग्न कति लाग्छ भाडा ? (सूचिसहित)
Sun, Jun 24, 2018 | 13:14:28 NST
14:41 PM (9months ago )
Total Views: 47.7 K
काठमाडौं, भदौ २६ – काठमाडौं उपत्यकाबाट दसैँ मनाउन घर जाने यात्रुका लागि मंगलबारदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरिएको छ । तोकिएको काउन्टरभन्दा अन्यत्रबाट टिकट किन्दा यात्रु ठगिन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै तोकिएको टिकट काउन्टरमा मात्र टिकट किन्न यातायात व्यवस्था विभागले आग्रह गरेको छ। तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिएमा प्रहरीमा खबर गर्न पनि विभागले अाग्रह गरेको छ ।
सरकार तथा यातायात व्यवसायीबिच शनिबार भएको छलफलपछि मंगलबारदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने सहमति भएको हो । यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायर नेतृत्वको सरकारी टोलीसँग शनिबार भएको वार्तामा बसको छतमा यात्रुका सामान राख्न पाउने तर व्यावसायिक प्रयोजनसहित यात्रु बोक्न नपाउने गरी सहमति भएको नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि यातायात व्यवसायीले भाडा बढाउनुपर्ने र गाडीमा छत राख्न पाउनुपर्ने माग गर्दै टिकट बुकिङ गर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए । दसैँको लागि उपत्यकाबाट झण्डै ५० लाख यात्रु बाहिरिने गरेका छन् ।
दसैँका समयमा यात्रु ठगी हुने गुनासो आइरहने कारण यातायात व्यवस्था विभागले तोकिएको भाडादरभन्दा बढी नतिर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ । ०७२ साल माघ २४ गते लागु भएको भाडादर नै अहिलेको भाडादर हो । यातायात व्यवस्था विभागबाट डिलक्स सुविधा लिएका गाडीले तोकिएको भाडादरमा २० प्रतिशत रकम थप गरी लिन
सक्ने विभागले जनाएको छ ।
हेर्नुहोस् कहाँ पुग्न कति भाडा लाग्छ ?